दर्जीद्धारा केन्द्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधीमा उम्मेदवारीको घोषणा -
0	September 13, 2021 1:57 pm
२८ भदौ, नवलपुर ।
नेपाली काँग्रेस चितवनका युवा नेता सुरेश दर्जीले नेपाली काँगे्रस क्षेत्र नं. ३ चितवनबाट केन्द्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधीको उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नु भएको छ । काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन नजिकीदै गर्दा यसको सरगर्मी बढ्न थाले संगै युवा नेता दर्जीले केन्द्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधीको उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको हो ।
दलित समुदायबाट संघर्ष गर्दै आएका युवा नेता दर्जी नेपाली कांगे्रस क्षेत्र नं. ३ चितवनबाट केन्द्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधी उम्मेदवार (दलित समावेशी तर्फ) उम्मेदवारीमा उठ्नु भएको छ । लामो समयदेखि नेपाली काँग्रेसमा सक्रिय रुपमा पार्टीलाई शसक्त बलियो पार्टी बनाउने उदेश्यकासाथ राजनितिक यात्रामा लागेर आसन्न काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेसनमा नेपाली काँगे्रस क्षेत्र नं. ३ चितवनबाट केन्द्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधी (दलित समावेशी तर्फ) को उम्मेदवार रहेको घोषणा गर्नु भएको छ । बाग्लुङ जिल्ला हालको जैमिनि नगर पालिका ७ जैदीमा रहेको संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालयको नेपाल विद्यार्थी संघको सचिव पदमा रहेर काम गर्नु भएको थियो । सानै उमेर देखि राजनितीक र सैद्धान्तिक छलफल विचार विमर्श गर्न रुचाउने दर्जि दलित समुदायवाट जैदिमा नेवि संघको दलित समुदायवाट एक मात्र प्रतिनिधि व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । उहाँका सबै आफन्त र सिङ्गो दलित समुदाय नै कम्युनिस्ट थिए तर उहाँ काङ्ग्रेसको राजनितीमा सक्रिय हुनुभयो । उहाँ काँग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनमा क्षेत्रिय प्रतिनिधीमा उठ्नु भएको थियो । उहाँ काठमाडौँको कुलेश्वर स्थित जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस नेवि संघको इकाइ सभापति , त्रिभुवन विश्व विद्यालय नेवि संघको उपसभापतिका रुपमा रहेर काम गर्नु भएको थियो । दर्जी सुशिल कोइराला फाउण्डेशनका फाउण्डर समेत हुनुहुन्छ ।
युवा नेता दर्जीले अग्रजको योगदान, लगानि र समर्पणलाई उच्च सम्मान कदर गर्दै आगामि दिनमा पनि अग्रज र युवा विद्यार्थी साथीभाइको सल्लाह सुझाववाट नै अगाडि बढ्ने दृढ संकल्प गर्नुभयो । युवाहरुलाई राजनीतिसँगै आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा अगाडि बढउन भूमिका खेल्दै बताउदै उहाँले सामाजिक काममा युवाहरुलाई परिचालन गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो । बाग्लुङ जिल्लामा जन्मिएका सुरेश दर्जीले बाग्लुङहुदैँ काठमाडौँ र अहिले चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका २३ नेपाली काँगे्रस क्षेत्र नं. ३ चितवनबाट केन्द्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधी (दलित समावेशी तर्फ) बाट उम्मेदवारमा उठ्नु भएको हो ।
पार्टीमा किशोर अवस्थाबाट नै नेपाली काँग्रेसका भातृसंगठन देखि राजनीतिक यात्रामा लाग्नु भएका उहाँले अधिवेशनमा सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई सहयोग गर्न अपिल गर्नु भएको छ ।
नवलपुरमा मोटरसाइकल चोरी गर्ने गिरोह पक्राउ